सोध्नै पर्ने भयो- विशेष पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने भिटेन कहाँ भाग्न लागेका थिए ? - Dainik Nepal
विनोद ढकाल २०७६ कार्तिक ८ गते ९:५९
राजनीतिप्रति कुनै चासो नराख्ने मेरो एउटा भाईले भिटेन पक्राउ प्रकरणको सूचना फेसबुकमा लेख्नासाथ प्रतिक्रिया दियो– देशमा लोकतन्त्र आएको थाहा पाएँ । यो उसको व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया थियो, अहिलेको समयप्रति ।
न कुनै पार्टी, न कुनै विचारको समर्थक हो, ऊ । ऊ त संगीतको मर्मसँग जोडिन्छ अनि सामाजिक अभियानका विषयमा बढी चासो राख्छ । दुई दिनका जीन्दगानीमा अलिकति कमाइयो भने संगीतमा नै रुमल्लिने, खेलकुदका क्षेत्रमा लाग्ने उसको सोच र योजना हुन सक्ला ।
हिप्पी शैलीका र्यापर समीर लामा घिसिङ (भिटेन) पक्राउको पक्षमा भन्दा विपक्षमा ठूलो जमात देखिएको छ । यो स्वभाविक प्रतिक्रिया हुने भैगो । किनभने कारण ठूलो छैन । अर्कोचाहिँ लामाको संघर्षको कथा निक्कै रोचक र बलियो देखिन्छ । भुइँमान्छेबाट उठेको एउटा र्यापर । खासगरी धनाड्य परिवारबाट मात्रै निस्किने र्यापरको चर्चा हुने गरेको देशमा रामेछापको गाउँबाट गाडीमा झुन्डिएर खलासी साथी बनाएर, उसले दिएको नाममा चलेको केटोको कथा रहेछ, भिटेन । त्यतिमात्र होइन, अंग्रेजी नपढेको, सुनेको भरमा नै सृजना गर्न सक्ने चातुर्य शिल्प भएको केटो रहेछ, भिटेन ।
प्रहरीले विशेष पक्राउ पूर्जी जारी गरेर भिटेनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यो यत्ति ठूलो अपराध थियो त ? विशेष पूर्जी जारी गरी भिटेनलाई पक्राउ नगरी नछाड्नुपर्ने ?
यो पक्राउ प्रकरणको चर्चासँगै सरकारको आधिकारीक धारणा पनि आयो । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटला यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भने– स्वतन्त्रता छ भन्दैमा नांगै हिँड्न पाइन्छ ?
यो उनको तहबाट प्रतिक्रिया दिनुपथ्र्यो भन्ने कुनै विषय होइन । न उनलाई जानकारीमा रहेको चिज हो । उनले यत्ति भन्न सक्थे– प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, मुद्दा जिल्ला प्रशासनले हेर्ने रहेछ । त्यतै थाहा हुन सक्ला । यद्यपि, सरकारका प्रवक्ताको उत्तरमा आएको प्रतिप्रश्नको जवाफ अर्को प्रश्न यस्तो पनि हुनसक्छ । कि, बहुमत छ भन्दैमा जसलाई नै कोच्न पाइन्छ ? जे पनि गर्न पाइन्छ, सरकारलेचाहिँ ?
अहिले भिटेनलाई दुव्र्यवहार गरेको भन्ने मुद्दा लगाउने तयारी गरेको छ । यो खासै बलियो मुद्दा होइन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक साताभित्र धरौटीमा छाड्न सक्छ, धरौटी नलिन पनि सक्छ । प्रहरीको पोशाकको दुरुपयोग गरेको देखियो तर यसमा प्रहरीले सम्झाएर सामाजिक सञ्जालमा यसरी नराख्न सचेत गराउन सक्थ्यो जसको प्रचार गर्न आवश्यक पनि थिएन । तर उसले मुद्दा नै चलाउने निधो गर्नुले अहिले आलोचनाको थाक सहनु परेको छ ।
अफताव आलमलगायतका ठूला अपराधका विषयमा प्रहरीको बढ्दो साख यहि निरन्तरतामा एउटा हिप्पी शैलीका गरिब गायक पक्राउले गिराउला भन्ने चिन्ता छ । भिटेन पक्राउ भनेको उनका आफन्त र परिवारले आलोचना गर्ने विषय मात्र होइन, पुरै संगीत, विश्व संगीत तिनका फ्यान, समर्थकले विरोध गर्ने हो । र, संगीतको कुनै विचार र पार्टी हुँदैन । दुई चार जना प्रायोजित कार्यकर्ताले वाहवाही गर्दैमा प्रहरीले यसलाई पराक्रम नठाने हुन्छ । यस घटनाले प्रहरीलाई ‘जोक्कर’ बनाउन सक्छ ।
समाजका ठूला प्रोफाइल भएका मानिस पक्राउ गर्दा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भनेर सय पटक अध्ययन गर्ने प्रहरीले यहि समाजमा लो प्रोफाइल भएको तर अलौकिक चर्चा कमाएको व्यक्ति पक्राउले कति असर गर्छ भन्ने अध्ययन गर्नु पर्ने थियो । भिटेनको समर्थनमा सारा संगीत उद्योग, सामाजिक अभियन्ता, विभिन्न युवाका समूह, सञ्जाल समूह उत्रिनु र प्रहरी, सरकारको आलोचना गर्नु भनेको गतिलो संकेत होइन । साना–साना निर्णयले उत्पात मच्चाउन सक्छ भन्ने विषयमा हेक्का राखियोस् ।
विश्वमा संगीतका आयाम र दृश्य अनेक हुन्छन् । त्यसलाई दुनियाँले स्वीकार गरेकै पनि छन् । नगरेको भए गँजेडी गायक बब मार्ले, माइकल ज्याक्सन जस्ताका भयानक फ्यान हुने थिएनन् । सामाजिक सुव्यवस्था भनेको कसैले प्रयोग गरेको स्ल्याङ शव्द वा उसको सामाजिक सञ्जालको चरित्रले कायम गर्ने कुरो हुँदैन । भिटेनमाथि लागेको एउटा आरोप प्रहरीको बर्दीमा गाँजा बनाउँदै गरेको, तान्दै गरेको तस्बिर पनि हो । यसो हो भने त प्रहरीको बर्दी लगाएर अपराध, बलात्कार, रक्सी पिएका कतिपय अभिनय त फिल्ममा पर्दामा देखिन्छन् । हरेक कलाकार समातेर ल्याउँदै दुव्र्यवहारको मुद्दा लगाउँदै थुनिदिने ? अनि, सरकारले त्यसलाई पराक्रम ठान्दै कुतर्क गर्ने ? यो त बचकना भन्दा अर्को खेल नै होइन, निर्णय नै होइन । यसर्थ प्रहरी अलिक मिहिन बनोस्, सरकार अलिक परिपक्व बनेर प्रतिक्रिया दियोस् ।